Iyo WWDC app inovandudzwa ichiwedzera diki nhau | IPhone nhau
Iyo Big Apple inomira kuve nekushandisa kwakawanda kwayo mu App Store. Nekudaro, zvine musoro kuti mune chiitiko chechiitiko chavo vane yavo app. Iyi ndiyo WWDC, musangano weApple wepagore wekuvandudza apo zviuru zvevagadziri vanoungana kuti vadzidze nezve Apple's software nhau, pamwe nekudzidza nezveIOS, macOS, tvOS uye watchOS neveCompertino mainjiniya avo.
Apple yakagadzirisa iyo WWDC app nezvikonzero zvakawanda. Iyo huru ndeye optimization yeapp ye nyowani iPad Pro. Asi ivo vakaitawo zvishoma zvigadziriso kune yemukati interface, pamusoro pekusanganisira iyo widget uye 3D Kubata mabasa.
Iyo WWDC app inovandudzwa, pasina zvakawanda nhau
Iyo WWDC application inobatsira zvakanyanya kwete chete kana iwe uri pachiitiko, asi mwedzi gare gare. Mariri unogona kuwana chikamu chakakura chemisangano iyo mainjiniya eApple vakapa kune vaipinda, pamusoro pechinhu chikuru chakazara umo MacOS Mojave kana iOS 12 yakapihwa gore rino.Ichikumbiro chekuti kunyangwe ichigadziriswa kunyanya muna Chikumi, inobatsira gore rese.
Apple yakatanga iyo 7.1 version yeapp nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Tinotenda kuti mukuru wacho aive iye inoda kugadziridzwa kweiyo nyowani iPad Pro. Asi, pamusoro peizvozvo, akati wandei mitsva mabasa akawedzerwa atinokuudza nezvazvo:
Widget: Widget yakawedzerwa iyo yatinogona kuwedzera kune "Nhasi" chikamu chedu mudziyo.
Ona gare gare: Chikamu chakawedzerwawo uko mavhidhiyo atakatanga kuona uye tisina kupedza achachengetwa. Tinogona zvakare kusanganisira mavhidhiyo atinoda kuona, asi tisati taona izvozvi.
3D Kubata: Kune rimwe divi, mabasa matsva akananga akaverengerwa muapp kubva pamba chidzitiro nekuda kweiyo 3D Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inogadziridza iyo WWDC app kuti iite ienderane neiyo nyowani iPad Pro